Sida loo Download & Isticmaal iDVD Dulucda
Talooyin fiicfiican inuu kaa caawiyo inaad si buuxda loogu isticmaalo iDVD
Talooyin iyo tabaha la shaqeynta si hufnaan ku iDVD. Ma heli karaa iDVD on cusub Mac? Ha welwelin! Hel kale ah kaas oo ka sii xoog badan!
2. iDVD for Windows
4. iDVD Dulucda
5. dhoofinta iMovie in iDVD
6. iDVD Guba MP4
7. iDVD Guba AVI
8. iDVD Guba MKV
9. iDVD Guba MOV
10. dhoofinta iPhoto in iDVD
11. dhoofinta FCP in iDVD
Sida loo Download iyo Isticmaal iDVD Dulucda
iDVD waxay bixisaa in ka badan 100 mawduucyada suugaan iyo dynamically loogu talagalay in la abuuro bedeley iyo submenus u filimada, sawiro, iyo music. Qaar ka mid ah ayaa la dhaceen si loo abuuro muuqaal ah oo firfircoon oo ay dareemaan, halka qaar kalena ay yihiin fudud iyo hal-abuur loogu talagalay. Waxa kale oo aad astaysto oo waxaan iyaga ku badbaadin si ay u isticmaalaan mashaariic kale DVD. In tutorial waxaad ku baran doontaa meesha ay u helaan mawduuc iDVD, sida loo isticmaalo iDVD, sida loo dhibta iDVD, iyo sida loo helo mawduucyada dheeraad ah oo qaboow.
Muhiim: iDVD ma aha hadda laga heli karaa Mac OS X kombiyuutarada cusub, laakiin waxa aad kala soo bixi kartaa ka Softonic ama la gubi DVD kale, sida Wondershare DVD Creator for Mac .
Qaybta 1aad: Sida loo Download iDVD Dulucda
Qeybta 2: Sida loo Isticmaalo iDVD Dulucda
Qeybta 3: Sida loo dhibta Dulucda iDVD
Marka aad markii hore la abuuro mashruuc DVD cusub, iDVD kuu ogolaaneysaa in aad kala soo bixi mawduucyada iDVD. Waxa kale oo aad heli kartaa mawduucyada marka aad la abuuro mashaariic Magic iDVD iyo OneStep DVD, si kastaba ha ahaatee, tilmaamaha soo socda ku tusi doona sida ay u soo bixi mawduucyada iDVD marka aad la abuuro mashruuc cusub.
1. Open iDVD ka dibna dooro abuuro mashruuc cusub . The Create Project suuqa kala hadal ka furmay.
2. Iyadoo la abuuro Project suuqa kala hadal, geli filename ee Save As beerta ka dibna riix Samee .
3. In qaybta Dulucda, dooro All ka sanduuqa dropdown ah. Doorashada All populates 7.0 Dulucda, 6.0 Dulucda, iyo Dulucda Old.
4. Hadda, hoos u rogto dooro mawduuc cirro ka fujiyaan / yaraaday. Dulucda cirro ka fujiyaan / yaraaday waa mawduuc bixi karo. Sanduuqa hadal A furi doonaa oo u oggolaan doonaa in aad kala soo bixi theme ee la doortay.
5. In sanduuqa wada hadal ah, dooro Download Hadda ka dibna riix OK .
mawduucyada iDVD ogolaado in aad ku daraan submenus, filimada iyo duubey, iyo sidoo kale Habee iyo sawiro Cudarada, audio iyo filimada. Waxaa jira si fudud ah si ay u helaan toobiye menu aad u isticmaali karto in aad ku darto submenus, filimada, iyo duubey in aad theme. Waxaa la tilmaamay in la + button bidix ee hoose ee shaashadda.
In tilmaamaha soo socda waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo menu toobiye iyo qaybta warbaahinta ku darto filimada, sawiro, oo maqal ah.
1. Click on the + button ka dibna dooro dar Submenu , dar Movie ama dar Muqaal . Habkaani waxaa lagu daray mawduuc.
. a dar Submenu - doorasho Tani waxay u ogolaaneysaa daawadayaasha in ay tagaan goobaha gaarka ah.
b. Ku dar Movie - Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa inaad geliso filimada. Waxaad ku haboon jiidi karaan jeedi filimada ka qaybta warbaahinta.
c. Ku dar Muqaal - Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa inaad sawiro ka qaybta warbaahinta daro si ay u abuuraan show slide ah.
2. Hadda, guji mar diilinta ganaaxa qoraalka si ay u xaalkaa magaca, font, style iyo size of qoraalka ah ee show submenu, filim, ama slide in aad ku daray in ay theme ah. Marka aad dhamaysid, double click in ay sii wadaan in ay u astaysto aad theme la audio, sawiro, iyo filimada.
3. In qaybta warbaahinta, dooro Audio , Photos , ama Movies in aad jeclaan lahayd in aad is geliso in aad theme.
4. Marka aad samayn ku daray content warbaahinta in aad theme, badbaadiyo mashruuca doorataa File , ka dibna Save / Save As ka menu ugu weyn.
Qeybta 3: Sida loo dhibta iDVD Dulucda
Tan iyo Apple mar dambe ma waxaa ka mid ah iDVD on Macs cusub, waxaa laga yaabaa in aadan ka heli taageero badan ama wada hadal ha ku dabaasho looxaan wadahadal ay, si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah talooyin aad dhib waxtar leh oo ku saabsan ka heli kartaa taageero iDVD page. Waxaa loo xafidayaa oo ay mar dambe updated by Apple, laakiin laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho qaar ka mid ah macluumaad waxtar leh si ay u xalliyaan dhibaatadaada. Waxa kale oo aad ka fiirin kartaa arrimaha shan dhib soo socda in inta badan ay la mawduucyada iDVD dhacaan.
1. Error # 34502 - baadi Tani waxay dhacdaa marka aad isku dayayaan in ay gubi DVD ah ee iDVD 6.
Waxaad xalin karo taas oo ag maraya in ay View menu, oo noqon ku TV Safe Area Show iyo tusiya Area Dalag Standard fursadaha. Marka aad dhamaysid, Guudmar mashruuca iyo hubi in ay arkaan in badhamada waa out of aagga.
2. Computer screen waa mid aad u yar oo mashruuc screen ballaaran.
Si loo xaliyo arrintan tagaan Window menu ka dibna dooro Fit shaashada . Waxaad ku laaban kartaa size hore doorataa Size dhabta ah .
3. farriimaha digniinta iDVD - Tani waa sanduuqa wada hadal in inta badan waxay muujinaysaa " Ha i mar kale muujiyaan ".
Waxaad sugi karo fariin digniin kale in uu soo laabto, ka dibna dooro " Ha iga mar kale muujiyaan "doorasho ama aad dib kartaa fariimaha ka doorataa iDVD aad rabtid , General , ka dibna riix on Digniino Warbixannada .
4. users kale ee aan awoodin inay isticmaalaan mashaariic xafidayaa.
Si loo xaliyo arrintan laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad wax ka bedel rukhsadda user ee mashruuca loo xafidayaa.
I. Dooro mashruuca loo xafidayaa, xaq guji saaran yahay ka dibna dooro Hel Info .
II. In Get suuqa kala Info, dooro Sharing & Ogolaanshaha , ka dibna dooran Read & qor ka Kuwo kale arbushin ilaa menu.
5. Ma awoodo si aad u eegto naqshadeynta iyo goobaha dhibic
Goobaha dejinta waxaa lagu dhisay in qaybo ka mid ah naqshadeynta iyo animations u mawduucyada. Ma aad ku dari kartaa ama u guuraan goobaha horena. Waxaad kaliya oo ku dami karaa. Haddii aad dareentid in aadan awoodin in aad u aragto wax ka mid ah aagagga dhibic iyo naqshadeynta aad, waxaa jira fursad goob naafo yahay. Waxaad u baahan doontaa inaad awood u furmo Menu ah.
I. Clicl on calaamad i hoose ee shaashadda ah in la furo ee Menu Info uu furmo suuqa.
II. Daaqadda Menu Info, tag dejinta Zones qaybta iyo dooro " zones dhibic Show iyo naqshadeynta la xidhiidha "sanduuqa.
Talinayo DVD gubi la Cool Dulucda
Hadda ka hor, Wondershare DVD Creator la talinayaa sida kale gubi DVD in iDVD. Waa ka badan DVD gubi ah; waxay bixisaa mawduucyada qabow iyo sifooyinka soo socda u filimada la abuuro, audio, iyo duubey.
Eeebana wax gubanaya video badan, sawir, iyo qaabab audio, sida AVI, MPEG, MTS, MOV, DAT, iyo wmv.
Kara isku sawir iyo video qaabab kala duwan si ay u abuuraan duubey firfircoon.
Waxay leedahay feature qani dhisay editor video for dheellitirka, abuurista saamaynta qoraalka, iyo dhafan, audio iyo watermarks galay videos.
Awood u Iyada oo DVD aad la DVD Menu a Free iyo arrimo.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan mashaariicda DVD in waqtiga dhabta ah.
Waxa ay taageertaa noocyada disc recordable, sida DVD + R, DVD-RAM, DVD-R, iyo DVD + RW.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la qabsato xal video salaysan shaashadda.
Kuwaas oo ka mid yihiin qaababka, laakiin ay ugu wanaagsan ee aad ku aragto in tallaabo. Waxaad ku soo bixi kartaa oo isku day inaad ka soo bilaash ah oo ku saabsan Wondershare page download. Sidaas waxaad yeelan doontaa waayo-aragnimo gacanta ugu horeysay la mawduucyada ay qabow iyo muuqaalada ka shaqeeya.
Sida loo Download iyo rakib iDVD on New Macs (Mavericks iyo Mountain Libaaxa ku jiro
Sida loo soo dejinta MKV in iDVD u Gubasho
iDVD Alternative: DVD Gubidda Software ka fiican yahay iDVD (Yosemite mid)
Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey si DVD - Guba wmv in DVD
Sida loo abuuro Muqaal Aperture ah iyo Guba si DVD
Sida loo Beddelaan MPEG2 in DVD
> Resource > DVD > 3 talooyin looga cabsado, waayo, iDVD Dulucda